Ithemometha yaBantu abaDala, i-Digital engeyiyo yoQhakamshelwano ne-Thermometer ye-Infrared engafundwanga ngeFahrenheit yaBantwana naBantu abadala
I-Meridian Analyzer 1. Uluhlu olubanzi lokuqonda isifo: qaphela ukufumanisa kunye nokuhlolwa kwezifo eziqhelekileyo ezinje ngamalungu angaphakathi omntu, amalungu omzimba namathambo, amalungu emizwa emihlanu kunye nee-orifices ezisixhenxe, uboya kunye nezihlunu. 2.Ukuchongwa kwenkqubo: ukuqonda ukukhawuleza kunye nokungabi nabuhlungu kwenkqubo ye-cerebrovascular, inkqubo ye-cardiovascular, inkqubo ye-nervous, inkqubo yesisu, inkqubo ye-urinary, i-hepatobiliary system, inkqubo yokuphefumula, inkqubo yokuzivocavoca, i-pediatrics kunye nezinye iinkqubo. 3.Ukuchongwa kwezahlulo: Kunokwenzeka ...
Impilo yonke kumatshini omnye xz2010-106
I-multi-parameter checker yezempilo iqukethe ibhodi ephambili, iscreen sokubonisa, ucingo olukhokelayo lwe-ECG, ikofu yoxinzelelo lwegazi (umntwana, umntu omdala osemdala, umntu omdala, umntu owandisiweyo), iprosesa yegazi yeoksijini, imodyuli yeparamitha emininzi, imodyuli yesiqhelo yemichamo, Imodyuli yonikezelo lwamandla, ibhodi ephambili, yenziwe nge-chassis, apho unxibelelwano lokuhambisa idatha lunokudityaniswa kwizixhobo ezisebenzayo ezinje ngeemitha zeswekile yegazi, iithemomitha zeklinikhi, ukuphakama kunye nezikali zesisindo, abahlalutyi begazi lipid, abafundi bekhadi lesazisi, iibhodi yezitshixo, nezinye izixhobo.
Udonga olufakelwe isixhobo sokuqonda isifo
Isixhobo sokuxilonga esiQhelekileyo soDonga 1. Isixhobo esisebenzayo, kubandakanya izinto zovavanyo ezisisiseko ezisithoba: uxinzelelo lwegazi olungangenisi, ukubetha kwentliziyo, ubushushu bomzimba, ukugcwala kweoksijini yegazi, ifusus, uvavanyo lomsele wendlebe, uvavanyo lwe-peripheral luvo, uviwo lombono, uvavanyo lokungaboni umbala, njl. 2. Ulawulo lolwazi, luxhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zonxibelelwano lwamazibuko, ukuhanjiswa kwexesha lokwenyani kweziphumo zovavanyo; Ukusebenza okuzenzekelayo, ukunciphisa inkathazo yokusebenza ngesandla, r ...
Inkqubo ye-Wfk ehlangeneyo yokuchongwa kwamayeza esiTshayina
Gubungela amaqela amahlanu aphambili eenkonzo ezisisiseko zempilo yoluntu: abantu abasempilweni, abantu abanezifo ezinganyangekiyo, abantu abadala, abasetyhini nabantwana.
Le mveliso ilungele umlinganiso wobushushu wabantu abadala, abantwana kunye neentsana. Kucetyiswa ukuba abantu abadala basebenzise ithemometha ye-infrared.
Le mveliso isebenzisa isihluzo sesithathu, esinokuhlukanisa ngokufanelekileyo amasuntswana ebacteria ngaphandle kokubamba umphefumlo wakho kwaye uthintele ngokufanelekileyo inkungu, umungu kunye nothuli. Iziqinisekiso ezigqityiweyo, iimveliso ziqinisekisiwe, ilaphu lokucoca ulwelo linyibilikise ilaphu + inqanaba lokhuselo lwelaphu elingalukwanga liphezulu, umsebenzi kunye nesikolo siyaphuma, soloko ulinda, isimbo esikhethekileyo sasehlotyeni, ukukhanya kunye nokuphefumla, Kulingana nobuso, ayikhululeki, ukumelana okuphantsi , awubambi mpefumlo, imicu yendlebe ethe tyaba, ekhululekile ukuyinxiba kwaye ungaziqinisi iindlebe.
Impilo ekrelekrele konke kumatshini omnye
Ukuphakama, ubunzima, i-BMI, ubushushu bomzimba, umbono, ukwakheka komzimba, uxinzelelo lwegazi, ukubetha kwentliziyo, ioksijini yegazi, i-ECG, iswekile yegazi, i-lipids yegazi, i-uric acid, njl .;
Uyilo oluhlanganisiweyo, ufakelo olula kunye nolondolozo;
Isikhokelo esipheleleyo selizwi, ukusebenza ngaphandle kwexhala;
Inkcazo ephezulu yekhamera, ifoto, inkxaso yevidiyo yoqobo;
Ukudityaniswa kwamayeza amaTshayina nawaseNtshona kubandakanya zombini ukuvavanywa kwamayeza asentshona kunye nokuchongwa kwamayeza emveli aseTshayina.
Iswekile yomgubo oximeter
Usapho kunye nabahlobo oogqirha bafumana idatha yexesha lokwenyani, balawule iswekile kwaye bangabi bodwa
Uhlalutyo lweenkcukacha manani, ukuvalelisa kwiphepha kunye neerekhodi
Ulawulo oluncedisayo lweswekile, ulawulo olulula lweswekile yegazi
Isikhokelo sokusasazwa kwelizwi, ngaphezulu kweqabane elinye
Ukongeza ekuhlangabezaneni neemfuno zamandla aphakamileyo, ukukrwada okuphezulu, njl. Ukusuka kwizixhobo zendalo ezinje ngomqhaphu, uboya, isilika, kunye nelothe, ukuya kwizinto zokwenziwa ezinje ngerabha, iplastikhi, i-resin, kunye nezinto zokwenziwa zefayibha Izinto, ukuya kwizixhobo ezitsha zokusebenza kunye nezinto ezihlanganisiweyo. Inomsebenzi wokuchasana nokuvumeleka, ukungena komoya okuhle, amandla aphezulu, kunye noxinzelelo oluphezulu lwe-hydrostatic.
Le mveliso yamkela maleko-ucoco. Ezona nkqubo ziphambili zemveliso zibandakanya ukunyibilika okunyibilikisiweyo, ispunbond, umoya oshushu okanye ukubetha kwenaliti, njl., Ezinomsebenzi wokuchasa ulwelo, amasuntswana okucoca kunye neebhaktiriya. Iziqinisekiso ezigqityiweyo, iimveliso ziqinisekisiwe, ilaphu lokucoca ulwelo linyibilikise ilaphu + inqanaba lokhuselo lwelaphu elingalukwanga liphezulu, umsebenzi kunye nesikolo siyaphuma, soloko ulinda, isimbo esikhethekileyo sasehlotyeni, ukukhanya kunye nokuphefumla, Kulingana nobuso, ayikhululeki, ukumelana okuphantsi , awubambi mpefumlo, imicu yendlebe ethe tyaba, ekhululekile ukuyinxiba kwaye ungaziqinisi iindlebe.